Home News Madaxda Dowladda Oo Ciidamado Gurmad Ah U Diraya Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/dhexe
Madaxda Dowladda Oo Ciidamado Gurmad Ah U Diraya Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/dhexe
Ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan kuwa 14-ka October ayaa duhurnimadii maanta waxa ay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho, iyaga oo ku biiraya ciidanka dowladda ee hawlgalka lagula dagaalamayo Mintidiinta Ururka Al Shabaab ka wada degaanka Basra oo ku yaalla duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Degaanka Basra ayaa shalay waxaa ka dhacay hawlgal gaar ah ay fuliyeen ciidamo is-garabsanayay, kuwaasi oo isugu jiray ciidanka xoogga dalka, kuwa AMISOM iyo ciidanka Mareykanka oo fuliyay duqeymo.
Ciidanka maanta ka baxay xerada Gen. Gordan ee magaalada Muqdisho ayaa tiro ahaan waxaa lagu sheegay inay gaarayan ilaa Saddex boqol oo askari, kuwaasi oo wata gaadiidka dagaalka, kuwa ciidanka xambaara iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah ee Ambalaasta.
Saraakliil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay inoo sheegeen in ciidankan ay ku biirayaan hawlgalka degaanka Basra, maadaama halkaasi ay gabaad ka dhigtaan kooxda Al Shabaab oo dhawr mar weeraro bartilmaameed ah ka soo qaaday.
Warar aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan qorshaha inuu ahaa ciidankan inay baxaan xalay saq dhexe, balse ay u baaqdeen Hub AMISOM loogu tagay inay bixiso oo ay diiday, islamarkaana ugu dambeyn ciidankan maanta loo dhameystiray agabkooda, sidaasina ay ku baxeen.
Previous articleSafar Badanaa: Farmajo oo si Hal haleel ah Jibuuti iyo Turkiga ugu socda.
Next articleFarmaajo Oo La Kulmay Qaar Kamid Ah Xubanaha Guddiga Dhaqaalaha Qaranka